नेप्सेमा बुधबार के भयो ? कसले कमाए – कसले गुमाए ? | Samaj Khabar
काठमाडौं । साताको चौंथौ कारोवार दिन बुुधबार नेप्से घटेपनि कारोवार रकम भने उच्चरुपमा बढेको छ । आज नेप्से छ दसमलव ७५ अंकले घटेर १७ सय तीन दसमलव सात अंकमा कायम रहेको छ । नेप्से सेन्सिटिभ पनि एक दसमलव ९४ अंकले घटेर तीन सय ६९ दसमलव एक अंकमा कायम रहेको छ ।
कुुल एक सय ४५ कम्पनीहरुको ११ हजार नौ सय ७४ वटा कारोवारमा ३८ लाख ९६ हजार चार सय ३१ कित्ता सेयर खरिद बिक्री हुुंदा कारोवार रकम दुुई अर्ब सात करोड २२ लाख १३ हजार एक सय आठ रुपैयाँ पुुगेको छ ।
कुल आठ वटा समुहको कारोवार भएकोमा पाँच वटा समुहको कारोवार बढेर तीन वटा समुहको कारोवार घटेको छ । होटल समुहको सुचक २३ दसमलव ८६ अंंकले बढेर २२ सय ११ दसमलव ५३ अंकमा कायम रहेकोमा दुुई करोड ३१ लाख ८० हजार छ सय रुपैयाँको कारोवार भएको छ ।
बिकास बैक समुहको सुचक १९ दसमलव ३६ अंकले बढेर १९ सय ६५ दसमलव ९४ अंकमा कायम रहेकोमा ४३ करोड २८ लाख २७ हजार रुपेयाँको कारोवार भएको छ । फाईनान्स, उत्पादनमुुलक र अन्य समुहको सुचक भने क्रमश छ दसमलव ९३, २३ दसमलव ६१ र आठ दसमलव ३९ अंकले बढेको छ ।
बाँणिज्य बैक समुहको सुचक भने आज ११ दसमलव ८९ अंंकले घटेर १५ सय ९१ दसमलव ९४ अंकमा कायम रहेकोमा ७४ करोड ४९ लाख ७५ हजार रुपैयाँको कारोवार भएको छ । यसैगरी बीमा समुहको सुचक एक सय ४० दसमलव ८४ अंकले घटेर आठ हजार आठ सय ४२ दसमलव ५२ अंकमा कायम रहेकोमा ६५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको कारोवार भएको छ भने जलबिद्युुत समुहको सुचक छ दसमलव ९३ अंकले घटेको छ ।
आज बढी कमाउने कम्पनीको सुचीमा प्रोग्रेसिभ फाईनान्स परेको छ भने बढी गुुमाउने कम्पनीको सुचीमा युुनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी परेको छ । कारोवारका आधारमा भने आज शुुर्या लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी अग्रंस्थानमा परेको छ ।
१ प्रोग्रेसिभ फाईनान्स १८७ १०
२ ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक ७४८ १०
३ सिद्धार्थ लगानी बृद्धि योजना—१ २६ १०
४ किसान माईक्रो फाईनान्स २७९४ १०
५ फष्र्ट माईक्रो फाईनान्स ११०० १०
१ युुनाईटेड इन्स्योरेन्स १५८५ ५.६५
२ एनबी इन्स्योरेन्स १८५५ ४.९३
३ न्यादी ग्रुुप पावर लिमिटेड ३२१ ४.४६
४ साना किसान बिकास बैंक १६६० ४.३३
५ सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स १८५० ४.०९
१ शुुर्या लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी १०३६९६२९२ १२८४
२ एनसीसी बैंक ९४६१६७९६ ४६४
३ गुुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स ८२३९०९०९ १२५०
४ प्रभुु बैंक ८१७५०६४९ ४३०
५ मुक्तिनाथ बिकास बैंक ५५२७३३३७ १०३५